7 Akanaka kwazvo Mafashama emvura muEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Akanaka kwazvo Mafashama emvura muEurope
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 11/04/2021)
Kuenda kuEurope kuri kudzokera munguva kune nyika yakagadzirirwa enzvimbo dzeumambo, masango, uye chakanakisa chisikwa uye madhiri emvura. Kunyangwe iwe uri kuenda kuItari kana Switzerland, kuronga a 2 mwedzi 'euro rwendo, kana chete uve nevhiki yenyika imwe chete yeEurope, iwe unofanirwa kuwana nguva yekuongorora 1 renzvimbo dzinoyevedza dzemvura muEurope, yakanyorwa mune yedu 7 akanakisa matsime emvura muEurope.
1. Iwo Akanaka kwazvo Anopfavirira MuEurope: Marmore Waterfalls, Itari
Marmore yemvura inosvika 165 m nehurefu kubva pa 3 pakukwirira kwe 85 M. saka, rwizi rurefu kwazvo rwakagadzirwa nevanhu muEurope ndiyo Marmore waterfall. This breathtaking waterfall is Located in the heart of the Umbria region and was created by ancient Romans.
Matombo machena-eruvara uye mapopoma ane mitsetse yakawanda akasvikika nyore nechitima kubva kuRome Termini kuenda kuguta reTerni. Zvitima zvekuenda kuTerni zvinowanzoitika uye chitima chinobuda awa imwe neimwe. Paunosvika paTerni chitima chechitima, kune mabhazi anogona kukuendesa kunzira yemvura. There is an entrance fee to the waterfalls.
zvisinei, neTrenitalia chitima tikiti iwe unowana kushomeka uye ndiwo mumwe mukana wekufamba nechitima kuenda kuMarmore mapopoma:)
Chipenga chidiki chepakati kubva kwatiri kwauri, pane mumaresitorendi zvikuru kutsoka kweMarmore mafashama, asi isu tinokurudzira kwazvo kubata panini kuti-enda kuDa Panzerotto. Kuva ne pikicha munzvimbo yakanyarara nekunaya kwemvura kuri nani kupfuura chiitiko chekushanya.
Roma kune Terni matikiti
2. Geothermal Waterfalls, Itari
Anonyanya kuzivikanwa uye mapikicha mapopoma emvura muItari ndiyo mvura ine mvura mumusha weDi Saturnia. Inowanikwa muTuscany, Saturnia matsime anopisa ndeimwe yakanaka kwazvo masango anopisa masango muEurope. Iri dhorobha idiki kumusha kune matsime anozivikanwa matsime kubva panguva dzeRoma. Zororo rako reTuscany haringave rakakwana pasina zuva muSuffurnia inopisa mvura. Zvitubu zvakanakira kuzorora mushure mekushanyira imwe tsvarakadenga dzemvura padyo, Mamiriyoni, uye mapopoma eGorello.
Anoshamisa eSaturnia nzizi dzemvura dziri chitima tasva kure neRoma. Chekutanga, iwe tora chitima kuna Orbetello-Monte Arg. uye kubva ipapo iwe unogona kusvika kune dzakanaka nzvimbo dzemvura nemota kana tekisi, zvese zvisingasviki 3 maawa kubva kuRoma.
Roma kuOrbetello Monte Argentina matikiti
3. Iwo Akanaka kwazvo Anopfavirira MuEurope: Rhine Waterfalls, Siwizarendi
Kuwedzeredza Zvakakodzera Nhare uye Schloss Laufen muzinda, Rhine mapopoma emvura ndeimwe yemawere mapopoma emvura muEurope. Pakutanga kutarisa, Rhine nzizi dzemvura dzinoratidzika kunge pfupi, asi ivo vakanyanya. Iwe unozogona kuwana idzi dzakanaka mapopoma mukubwinya kwavo kwese kubva ku kukwira chikepe murwizi.
Zvakanaka kushanyira Rhine waterfalls muzhizha mushure mekunge chando chanyungudika uye zvese zvakakomberedza zvakasvibira zvakasvibira. Iyo Rhine mapopoma ane 50 maminetsi ezvitima anotasva kure neZurich uye kune zviteshi zviviri zvezvitima pamativi ese emvura. saka, zviri nyore kwazvo kuenda kune zvinoshamisa mapopoma emvura ose emhuri uye Solo vafambi.
4. Staubbach Falls, Siwizarendi
Kufuratira musha wakanaka weAlpine musha, Staubbach mvura iri muLauterbrunnen mupata muSwitzerland yakaisvonaka. Nzvimbo dzakapoterera rwizi rwakareba rwakafanana nechidhori chine rudo. Kune aripo 72 mapopoma emvura muLauterbrunnen mupata, asi pasina kukahadzika, Staubbach mapopoma emvura ndiwo akanyanya kunaka uye ane rudo kune vese. Mumwaka wechirimo, rwizi runouya kune hupenyu hwakanaka, uye kudziya kwakasununguka kunobvumira kukwira nokutsvaka nharaunda.
Vamwe vanoti uyu mupata weSwiss akafuridzira J.R.R Tolkein's novel Rivendell, uyo angangodaro akagara mumusha mudiki uye aiyemura maonero emvura iri kubva kune cafe patsoka dzayo.
Staubbach mapopoma emvura ari padyo neguta Bern uye iwe unogona kusvika kuLauterbrunnen mupata mune zvisingasviki 3 maawa nezvitima kufamba kubva kuLucerne kana mune isingasviki 4 maawa kubva kuGeneva. Kubva pachiteshi chechitima, idzo nzizi dzinofamba famba uye unongoda kuyambuka guta.
Lucerne kune Lauterbrunnen matikiti
Geneve kuLauterbrunnen matikiti
Lucerne kune Akabatana matiketi
Zurich kune Akabatana matikiti
5. Iwo Akanaka kwazvo Anopfavirira MuEurope: Stuibenfall, Kudzvinyirira, Ositiriya
Kana iwe uchida zvakanyanyisa uye uchitsvaga kunyanya kutarisa kwakanaka, iwe uchanyatsoda iyo Stuibenfall mapopoma emvura muTirol. Mabhiriji ekumiswa uye shongwe dzinochengetera zvinoita kuti kukwira kune uku kunoshamisa kwemvura kuve kunonakidza uye kunonakidza. Tyrol refu uye rakakura mvura iri 2.4km, saka waigona kuiongorora mukutenderera-rwendo zuva rese. The Hiking muhwezva inotanga uye inopedzisa panopakwa mota mutaundi reUmhausen.
Iwe unosungirwa kusangana nevazhinji vanofamba munzira uye vashanyi munzira, saka usanetseke nekunzwa kusurukirwa kana kurasika.
Munich chete 3 maawa kure nechitima kubva kuStuibenfall. saka, izvi zvinoreva kuti iwe unogona kupukunyuka nyore kwevhiki kubva kuguta rakabatikana kuenda kune rimwe rakanakisa mafashama emvura muEurope. saka, iwe uchafarira zvese kumaruwa neMunich pazororo rako rechirimo muEurope.
6. Krimml Falls, Ositiriya
Inowanikwa muAustria paki huru yenyika, Yakakwira Tauern National Park, iyo yeKrimml yemvura ine matatu-tier waterfall, richisvika 1490 m pakukwirira uye 380 m yakakwira. Masango akare, fauna, tsvuku tsvuku, uye makondo endarama anongova mashoma evagari vepaki vanogona kuyambuka nzira newe munzira yekumwe kunoshamisa mapopoma muEurope. Kana uri musasa anofarira uye ane ruzivo rwekufamba musango, paki iyi uye Krimml mapopoma emvura ichave chiitiko chisingakanganwiki munzvimbo dzakakwirira dzeAustria.
Nzvimbo dzakatenderedza nzizi dzemvura dzinonyanya kushamisa mumatsutso mushure mekunge chando chanyungudika apo nzvimbo dzemvura dzeKrimml dzichidurura., shiri dzinoimba uye hukuru yakaisvonaka inomutswa mushure menguva refu yechando.
Unogona kufambisa kana tora chitima & bhazi kuenda kuKrimml mapopoma emvura. Rwendo rwacho ishoma pane 3 maawa kubva kuSalzburg uye haisi nguva yauchange uchifamba muparadhiso yeAustria.
7. Waterfalls of Gavarnie, Furanzi
Iri mumupata wakasvibira wakasvibira, mapopoma eGavarnie akakwirira muFrance ari 422 mita yakakwira uye inozivikanwa kwazvo pakati pevashanyi. Nekuona kweaHaisi Pyrenees, iyo Gavarnie mapopoma emvura ari maviri ane rudo uye akakwana kune vakakura vanoviga vanoshuva kuongorora uye kukunda iyo French Pyrenees. Gavarnie mapopoma emvura ari chete 40 maminetsi kutyaira kubva kumusha weGavarnie.
Iwo akanaka mapopoma emvura ari pamuganho pakati peFrance neSpain mune inoshamisa Pyrenees uye chete 4 maawa kubva kuToulouse nechitima.
Europe inzvimbo yekurota kune vafambi vega uye mhuri. Zviri nyore kwazvo kufamba nemuEurope uye ese akanaka mapopoma emvura pane edu zvinyorwa anowanikwa kwazvo nechitima kana bhazi, nokuti zuva-nzendo kana musasa, yevafambi vane ruzivo kana vatambi vari kunzwa kunetseka uye kurota kwekutsvaga yakanakisa yemaEurope maitiro.
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvetiketi matikiti uye nzira dzekufambisa kune chero ipi neipi yakanaka mafiro emvura pane yedu runyorwa.
Unoda embed yedu Blog romukova “7 Akanaka kwazvo Mafashama emvura muEurope” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-waterfalls-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europetravel Train Travel chitima navi France travelgermany Travelingtips travelswitzerland Waterfalls WaterfallsInEurope